.:. စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းရာနယ်မြေ .:.
FBပေါ်မှာစိတ်မချမ်းသာစရာတွေနဲ့ပြည်နှက်နေတဲ့အချိန်ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်လိုစိတ်မရှိပါဘူး၊အလားတူသတင်းမျိုးကိုဦးကျော်သူအပါအဝင် ကပုန်းနာရေးကူညီမူ့အသင်းမှညီလေးဇော်ကြီးတို့လည်းတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှီခိုလုပ်ကိုင်းစားသောက်နေကြရတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖေါ်ဝါရီလကစလို့မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့အရက်သောက်ပြီးသေဆုံးနေကြပါတယ်။သေဆုံးပုံတွေကလည်း၃ယောက်တဖွဲ့ ၊၂ယောက်တဖွဲ့ ၊ တယောက်ချင်းaနရာဒေသကွဲပြားပြီးသေဆုံးနေကြပါတယ်ဒီနေ့သောက်နောက်နေ့သေ၊ဒီညသောက်ဒီညသေတွေဖြစ်နေပါတယ်၊အရက်ထဲမှာ လူသေစေလောက်တဲ့အဆိပ်ပါနေလို့သေရတာပါ၊ဒီအရက်တွေဟာလိုင်စင်မဲ့ခိုးထုပ်နေတဲ့အရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဈေးကွက်မှာဖြန့် ချီလို့ မရပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသာဝင်ထွက်သွားလာစားသောက်နိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးများဖွင့် လှစ်ထားတဲ့ မြန်မာဆိုင်တွေ ကိုသာဖြန်ချီထားတာဖြစ်ပါတယ်၊ဆိုတော့ ကာသေစရာရှိမြန်မာနိုင်ငံသားအရက်သောက်တတ်သူများသာသေနေကြပါတယ်၊ခုဆိုရင်သေနုန်းကပိုမြင့် လာနေပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့လည်းလက်လှမ်းမှီသလောက်ရောက်လေရာတွေမှာဒီသတင်းတွေကိုပြောပြနေကြပေမဲ့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အသိပေးဖို့ ဆိုတာလက် လှမ်းမမှီပါဘူး၊မလေးရှားမှာလစဉ်အပါတ်စဉ်ထုပ်နေတဲ့ ဂျာနယ်တွေထဲမှလည်းအကျယ်တဝင့် ဖေါ်ပြတာကိုမတွေ့ မိသေးပါဘူး၊ဒီနေ့ လည်းတစ်ယောက်သင်္ဂြိုလ် လိုက်ရပြန်ပါပြီ၊ကပုန်းနာရေးကူညီမူ့ အသင်းဥက္ကဌဦးဆန်းဝင်းလည်းနားချိန်အိပ်ချိန်တွေတောင်မမှန်တော့ လောက်အောင်ဖြစ်နေပါပြီ၊ဆိုတော့ ကာ..ကျွန်တော် စိတ်ပိုပူနေမိတာကတော့ မကြာခင်ရောက်လာတော့ မဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်မှာသောက်တတ်စားတတ်သူတွေသောက်ကြစားကြပါလိမ့်အုန်းမယ်၊ဒီအရက်တွေကလည်းဘယ်ဒေသတွေအထိပြန့် နှံ့ နေတယ်ဆိုတာမူရင်းဖြန့် ချီသူတွေတောင်မသိနိုင်လောက်တော့ ပါဘူး၊ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ် သူတွေသောက်မိလေမလည်းဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် သာဒီစာကိုကျွန်တော်ရေးရခြင်းသာပါ၊ဒီစာကိုဖတ်မိတဲ့ မိတ်ဆွေတိုင်းကိုလည်းအကူအညီတောင်းလိုပါတယ်၊ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာဒီသတင်းလေးပြန့် နှံ့ သွားရလေအောင်ဝိုင်းဝန်းshare ပေးကြစေလိုပါတယ်၊မလေးရှားမှာရှိနေတဲ့ ခင်းဗျားတို့ ရဲ့ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်း အသင်းတွေကိုလည်းစာနှင့် ဖြစ်စေဖုန်းဆက်ရ်ျဖြစ်စေအချိန်မှီအသိပေးကြစေခြင်ပါတယ်၊ခုသေဆုံးမူ့ တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နေရာတွေကတော့ ပူချွန်း၊ဘလက်ကောင်း၊ ချရပ်၊ကလန်တန်းပြည်နယ်တွင်း၊စကင်ဂျမ်း၊ကာဂျန်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ မြန်မာနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းနိုင်ကြပါစေလေးစားစွာဖြင့်ဤဘလော့အားမလေးရောက်ဧဒင်ဥယျာဉ်အဖွဲ့အားလုံးသို့ email 175000 ကျော်ကို www.edinooyin.com မှတစ်ချိန်းတည်းဖြန့်ချီပြီးဖြစ်သည်။ လာမည့်သင်္ကြန်တွင် မြန်မာလူငယ်အချို့ နှစ်စဉ် အရက် သောက်လေ့ရှိသည့်အတိုင်း သောက်သုံးကြသဖြင့် ယခုအချိန်သည် သတိပေးရမည့် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် ။ ဤသတင်း ဂျာနယ်များတွင် မဖော်ပြသေးသောကြောင့် မိမိ၏ သူငယ်ချင်းများမှ အရက်သောက်တတ်သူများအားလုံးထံ ဖုန်းဖြင့်အသိပေးရန် ။ ဤသတင်းဖတ်အပြီး မြန်မာစာလုံးတံဆိပ်ပါသော မလေးရှားရှိမည်သည့်အရက်ကိုမျှ မသောက်သုံးဖို့တားရန် ။ ဤ သတင်းဖတ်အပြီး မြန်မာဆိုင်များအားလုံး မလေးရှားရှိ လိုင်စင်ရ အရက်များကိုသာ ပြောင်းလဲရောင်းချပေးရန် ။ ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ အထူးတိုက်တွန်းသည် ။ Credit:ဧဒင်ဥယျာဉ် Ref:www.facebook.com
ဘောလုံးပွဲ ၀ါသနာ ရှင်များအတွက် သတင်းကောင်း
မြန်မာ ဘောလုံး ၀ါသနာရှင်များအတွက် ဘောလုံးဖိုးကဒ် ခန့်မှန်းချက် ကောင်းတဲ့ ၀က်ဆိုဒ် တစ်ခုကို ညွန်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဘောလုံး ပွဲကြည့်တဲ့သူတိုင်း အနိုင်ပွဲအများဆုံးရရှိကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလျှက်............. အောက်လင့်ခ် မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား ။ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပါ
ကလေးအသေများ၏ သွေးသားကို အမှုန့်ကြိတ် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆေးတောင့်များ
ကလေးအသေများ၏ သွေးသားကို အမှုန့်ကြိတ် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆေးတောင့်များ တရုတ်မှ တောင်ကိုရီးယားသို့ တင်သွင်းမှုအား ဖမ်းဆီးရမိ
source by: မမီးလေး
စားအုန်းဆီကို ဆပ်ပြာမှုန့်ရောပြီး ပဲဆီအဖြစ် လိမ်ရောင်း
အေးလျှင် ခဲတတ်သော အာနိသင် ရှိသည့် စားအုန်းဆီကို မခဲရန် အနံ့ပျော့ ဆပ်ပြာမှုန့်များ ရောကျိုကာ ပဲဆီအနံ့ သွင်းပြီး ပဲဆီအဖြစ် ရောင်းချ မှုများ ရှိနေ ကြောင်း တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန်မှ ဆုံဆီသီးသန့် ရောင်းချသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ vဈေးသက်သာသော စားအုန်းဆီကို မီးအပူပေး ကျိုပြီး အနံ့သိပ်မပြင်းသည့် ဆပ်ပြာမှုန့်များနှင့် ရောလျှင် စားအုန်းဆီသည် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်လျှင်ပင် မခဲဘဲ အရောင်မှာလည်း ကြည်လာကြောင်း၊ ဆပ်ပြာမှုန့် ရောထားသည့် စားအုန်းဆီ တစ်ပီပါကို မြေပဲရနံ့ တစ်အောင် စရောလျှင် ပဲဆီနှင့် ဆင်တူယိုးမှား ဖြစ်သွားပြီး ပဲဆီအဖြစ် ဈေးမြှင့် ရောင်းကြကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။ အိမ်ရှင်မ အများစုသည် စားအုန်းဆီသာ ခဲပြီး ပဲဆီဆိုလျှင် မခဲဟု လွဲမှားစွာ မှတ်ယူထား ကြသဖြင့် မခဲအောင် ဆပ်ပြာမှုန့် ရောကျိုခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုခေတ်တွင် ဓာတုဗေဒ နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ရနံ့မျိုးစုံ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရနေသဖြင့် မခဲအောင် လုပ်ထားသည့် စားအုန်းဆီကို အနံ့သွင်းပြီး မြေပဲဆီအဖြစ် လိမ်ညာရောင်းချခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။ မြေပဲဆီမှန်လျှင် မခဲဟုသာ မှတ်ယူထားသော အိမ်ရှင်မများ၏ ဗဟုသုတသည် လွဲမှားနေကြောင်း၊ မြေပဲဆီ ကြိတ်လျှင် ရေနွေးဖျန်းပြီးမှ ကြိတ်ရပြီး ဆီစစ်များနှင့် ကောင်းစွာ မစစ်နိုင်လျှင် မြေပဲဆီ အစစ်သည်လည်း ရေခဲသေတ္တာထဲကို ထည့်ထားလျှင် ခဲကြောင်း၊ ယခုဖြစ်စဉ်သည် အိမ်ရှင်မများ အသိအမှတ် လွဲမှုအပေါ် အခွင့်အရေးယူ အသုံးချခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပခုက္ကူမြို့မှ ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။ ယခင်က စားအုန်းဆီနှင့် မြေပဲဆီ ရောပြီး အနံ့ကောင်းစေရန် မြေပဲရနံ့ ထည့်ကြောင်း၊ ယခု စားအုန်းဆီကို မခဲအောင် လုပ်ပြီး မြေပဲရနံ့ဖြင့် မြေပဲဆီဟု ရောင်းနေသည်ကို ကြားနေရကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ " မြေပဲဆီ အစစ်ဆိုရင် လျှာပေါ်မှာ ဆိမ့်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အရသာ ရှိတာကို သတိပြုသင့်တယ်" ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ လက်ရှိ မြေပဲဆီ လက်ကားဈေး တစ်ပိဿာ ၃၇၀၀၊ ၄၀၀၀ ကျပ်ခန့် ရှိပြီး မြေပဲဆန် တစ်ပိဿာ ၁၂၀၀၊ ၁၀၀၀ ကျပ်ခန့် ရှိကာ စားအုန်းဆီ လက်ကား တစ်ပိဿာ ၁၆၅၀၊ ၁၇၀၀ ကျပ်ခန့်သာ ရှိသဖြင့် ဆီရော ရောင်းလိုသူများပင် တွက်ခြေကိုက်ကြောင်း ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင် စားအုန်းဆီ ဈေးကွက်အတွင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Source By; ဧဒင်ဥယာဉ်
ညီငယ် နေဇော်လင်း နဲ့ အမှတ်ရ
မလေးရှားရှိ သူငယ်ချင်း ဘလော့ဂ် များအကို တွေ့ချင်ခဲ့တာ မနေ့က နာမည်ကြီး မင်းသားလေး ညီငယ် ဘလော့ဂ်ဂါ နေဇော်လင်း နဲ့ ဆုံဖြစ်ပါတယ် ။ ဘလော့ဂ်ဂါ ညီအကို တွေနဲ့ အပြင်မှာ တွေ့ဖြစ်တာ အရမ်းကို ကြည်နူးပိတီတွေဖြစ်ပြီး စကားတွေလည်းအများကြီး ပြောဆိုဖြစ်ကြပါတယ်။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုစွာ ဧည့်ခံပေးတဲ့ ညီငယ် ဘလော့ဂ်ဂါ နေဇော်လင်း ကိုလည်း ဒီနေရာ ကနေ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ ညီငယ်လေး နေဇော်လင်း ။
Source by; နေမျိုး
The Train has just arrived.(နိုင်ငံတကာ အသုံးပြုနေသော မီးရထားများကို ဆုံးအောင် ကြည့်ရှု့အားပေး သွားကြပါဦး ခင်ဗျား)
And now the Best! INDIAN 's ALL ABOARD !
- the ultimate prize winner -
Sorry Train is Late.... ! .
O, Finally it made it in.......!
ASTRONAUT PICTURE MAIL from Wheels
ASTRONAUT PICTURE MAIL
NASA astronaut Douglas Wheelock who is currently aboard the International Space Station shares pictures of the Earth he snaps with
the world through Twitter.
source by: အချိုင်းပုပ္ပါး
မိမိနှင့် လေဖြတ်သူဝေဒနာရှင်တို့ကို ခွဲခြားသိပါစေ....ကူညီပေးပါ
ဒီအချက်တွေသင်သိရင် အသက်ပေါင်းများစွာကယ်နိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ကယ်တင်ရာရောက်ပါတယ်
လေဖြတ်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ကြွက်သားတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သွေးကြော ပေါက်ခြင်း(သို့ )ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။
လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲတွေကို အားလုံးသိကြမှာပါ။လူတစ်ယောက်ဟာ ပုံမှန်မသန်စွမ်းတော့ဘဲ အိပ်ရာပေါ်မှာနေသွားရဖို့ များပါတယ်။အိပ်ရာပေါ်မလဲတောင် ပုံပျက်ပန်းပျက်နဲ့အသက်ရှင်သွားရမှာပါ။ဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာလဲ အသက်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဖြတ်မှန်းသိပြီး ချက်ချင်းကုနိုင်ရင်ဖို့အောက်ပါရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကို မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကင်မျိုးစုံကျွေးတဲ့ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ဟာ ခလုတ်တိုက်ပြီး လဲကျသွားပါတယ်။အားလုံးကဆေးရုံကားခေါ်ပေးမယ်လုပ်တော့ သူမက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊အုတ်ခဲကိုခလုတ်တိုက်မိလို့လဲသွားတာပါလို့ ပြောပြီး
စားစရာဆက်စားပါတယ်။သူမကြည့်ရတာ မူပျက်နေတယ်ထင်ရပေမယ့် ဧည့်ခံပွဲပြီးတဲ့ အထိနေသွားပါတယ်။ညကျမှ သူ့ အမျိုးသားလှမ်းဖုန်းလို့ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်ရတာက သူမကို ညနေ ၆ နာရီမှာဆေးရုံတင်လိုက်ရပြီး ဘာမှမလုပ်ရသေးခင်မှာပဲ ဆုံးသွားပြီဆိုတာပါပဲ။တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပါ။သူမဟာဧည့်ခံပွဲမှာကတည်းက လေဖြတ်ခြင်းကို စခံစားခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးနားကလူတွေကသာ လေဖြတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကို ခွဲခြားသိနိုင်ခဲ့ မယ်ဆိုရင် သူမဟာဒီနေ့ ထိလူ့ လောကမှာရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ အတွက် သင်ခန်းစာပါပဲ။
လူတိုင်းသိသင့်ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော အထူးကုဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်ကတော့ လေဖြတ်တယ်လို့သိသိရခြင်း ၃ နာရီအတွင်းလူနာဟာ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန် တစ်ယောက်သာဆို ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်တာကို လေဖြတ်တာလို့ချက်ချင်းသိနိုင်လို့ချက်ချင်းစမ်းသပ် အတည်ပြုနိုင်ပါမယ်။ ပြီးတော့ အနည်းဆုံး ၃နာရီအတွင်းမှာ လူနာကို ဆေးကုသမှု ခံယူစေနိုင်ရင် လူနာဟာ ဝေဒနာမျိုးစုံ ခံစားရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မနားမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဒါကြောင့် အားလုံးအတွက်ရော၊ ကိုယ့်အတွက်ပါ လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ လေဖြတ်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချက်လွယ်လွယ်လေးတွေကို ဆရာဝန်ကြီးက ပြောပြပေးခဲ့ ပါတယ်။
လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ရုတ်တရက်လက္ခဏာများStroke လို့ ခေါ်တဲ့လေဖြတ်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်အတွင်းပိုင်း သွေးကြော တစ်ခုခုပေါက်လို့ ၊ ဒါမှမဟုတ် ပိတ်သွားလို့ဦးနှောက်တစ်နေရာမှာ သွေးမရတော့ဘဲ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ခန္ဒာကိုယ် ထိခိုက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနျောက်မှာဖြစ်တဲ့ နေရာတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတဲ့ အတွက် လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေက တစ်ခါတစ်လေမှာ ခွဲခြားရခက်ပါတယ်။ ကံဆိုးချင်လို့ ဘေးလူတွေက မသိ နားမလည်ရင်တော့ သေပြီပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့လေဖြတ်တာရဲ့လက္ခဏာတွေ၊ လုပ်ရမှာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို အတိုကောက်မှတ်ချင်ရင် သူ့ ရောဂါရဲ့ နာမည်အတိုင်း STROKE လို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာလိုသိထားလဲ တူတူပါပဲ။ အရင်ဆုံး လူနာကို S,T,R ဆိုပြီး ၃ခုခိုင်းကြည့်ပါ။(S=Smile) လူနာကိုပြုံးခိုင်းပါ။ (ပုံမှန်ပြုံးသလိုဖြစ်ရဲ့ လား၊ရွဲ့ နေစောင်းနေလားကြည့်ပါ)(T=Talk) စကားပြောခိုင်းပါ။(R=Raise both arms) လက်နှစ်ဖက်မြှောက်ခိုင်းပါ။ ဒါတွေအကုန် ချောချောမွေ့ မွေ့ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ STR ပြီးလို့OK ပေါ့။ တစ်ခုခုကို မလုပ်နိုင်ခဲ့ ဘူးဆိုရင်တော့ (E=Emergency) အရေးပေါ်ဖြစ်လို့ဆေးရုံတင်မှရပါမယ်။ နောက်ထပ် လက္ခဏာတစ်ခုကိုလဲ ထပ်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ လူနာကို လျှာထုတ်ခိုင်းပါ။ လျှာဟာ လိမ်ခေါက်ပုံပျက်ပြီး တစ်ဖက်ဖက်ကို စောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ လေဖြတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ လူနာဟာ အရမ်းစိုးရိမ်ရလို့အမြန်ဆုံး ဆေးကုသမှုခံယူရအောင် လုပ်ပေးပါ။ ဒီတော့ဒီဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ အချက်တွေကို သင်ကိုယ်တိုင်လဲ မှတ်သား၊လက်လှမ်းမီသမျှလဲ ပြောပြမယ်ဆိုရင် သင်အပါအ၀င် လူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ S,T,R,O,K,E မမေ့ နဲ့နော်။
ဒီပို့လေးကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ခဗျ........အကိုတယောက်က မေးပို့ပေးတာပါ.....
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲနေထိုင်နေတဲ့ ကျတော်တို့တွေ အတွက် တန်ဖိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်.....။လေဖြတ် ကျန်းမာရေးကို သိရှိပြိး မိမိသိတတ်သလောက် လေဖြတ်ဝေဒနာရှင်အား ကူညိထောက်ပံ့ပေးကြပါ...ခဗျ..။ကျတော့ ၁၅နှစ်သားအရွယ်လောက်တွင်လည်း ကျတော်၏ အဒေါ်တယောက်မှာလဲ ကျတော်နှင့် စကားမြည်း ပြောဆိုပြီး သူမ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်...၃မိနစ်တာမျှ..သာဝေးပါသည်...အိမ်အရောက် ထမင်းချက်ရန် ဆန်ခတ်ရင်း လေဖြတ်ဝေဒနာကို အပြင်းထန်ခံစားရကာ..စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်းမှာ အသက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်.....။သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အနီးနား ဝန်းကျင်မှာ တစ်ဦးတယောက် လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေသည်ကို ခွဲခြားသိနိုင်ပါစေ.....အစ အဆုံး မေးထဲကပဲ ကူးထားတာပါ...။သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ....
Source by; ကိုကိုအောင်
Download Zawgyi-Font Software 2008
အသစ်တင်တိုင်း email ပို့ပေးပါမည်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ email လိပ်စာသာထားပေးခဲ့ပါ
အမရပူရ - ကျမ်းပြုအကျော် - မဟာဂန္ဓရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကဘိဝံသ ၏ဆုံးမသြ၀ါဒ
အိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တစ်နေ့ တာ၏ကုန်သွားချိန်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြလော ကုသိုလ် - ဥစ္စာ - ကျမ်းသန့်သာ၍ ပညာတန်ခိုး တမျိုးမျိုးမှ - အကျိုးမထွက် ထိုနေ့ရက် သက်သက်ဝမ်းနည်းဘွယ် အလုပ်ဆိုင်းရွေ့ အမေ့စောင့်စား - အမှားမမြင် - အမြင်မလင့် ပြင်းမွေ့လျှော် ဤငါးဖော် - နတ်သော်မငြား မကြီးပွား အိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်လော့ ဆင်ခြင်ကြည့်က သတိရ၍ ကြီးပွားအမှု ကြိုးစားပြုလော့ ။
( မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီး )
၁။ လူနတ်ချမ်းသာ, လိုချင်ရှာ, ပြုပါ ဒါန-သာ။
၂။ အနာရောဂါ, ကင်းချင်ရှာ, စောင့်ပါ သီလ-သာ။
၃။ စိတ်ဆင်းရဲတာ, လွတ်ချင်ရှာ, လုပ်ပါ သမထ-သာ။
၄။ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ, လိုချင်ရှာ, ရှုပါ ၀ိပဿနာ။
ထိုလေးမျိုးမှာ, ဆွေသဟာ, ကြိုက်ရာရွေးချယ်ပါ။
ကယ်ပါစကိုင်းကီး Free ရယူနိုင်သောဝက်ဆိုဒ်
Firefox Speed ကိုသုံးဆလောက်မြန်စေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ
Virus သတိ ()
မလေးရှားရောက် အရက်သောက်တတ်သူ မြန်မာများအတွက် အထူးသ...
သယ်ရင်း တခုခု ရေးထားပေးခဲ့ပါနော်
~~~ယနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ~~~
မလေးရှား တနိုင်ငံလုံး တက္ကစီ ကားအငှားလိုက်ပေးခြင်း ၊လေယာဉ်ကွင်း=ယူအမ်ရုံး=မြန်မာ့သံရုံး = အကြို/ပို့ အလှူမင်္ဂလာ ၊ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ များကိုရိုက်ပေးခြင်း ၊ လိပ်စာကဒ် ၊ မွေးနေ့ကဒ် များကို ရိုက်ပေးခြင်း Mp3,Mp4,Mobile Phone တို့တွင် မြန်မာသီချင်းများကို ထည့်ပေးခြင်း ၊ မိမိတို့ရိုက်ကူးထားသော ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းများကို video editing လုပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ကလန်း ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ
ဖုန်း 010 - 2556 131
ဖုန်း 010 - 8300 221
မိမိတို့၏ စီးပွားရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး ၊ အချစ်ရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ နိုင်ငံခြားကိစ္စ အမျိုးမျိုး ၊ ခလေးနာမည်ပေး ကင်ပွန်တပ်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းနာမည် ပေးခြင်း အမျိုးမျိုးတို့ကို စေတနာမေတ္တာထား၍ ဟောကြားပေးနေပါပြီ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ တပည့် ဆရာမ ဆွေဇင်ဝတီ နန်းထိုက်ပဒုမ္မာမြန်မာစတိုးနှင့်စားသောက်ဆိုင်
ဖုန်း ၀၁၂ - ၉၁၃၃ ၀၉၃
၀၁၆ - ၆၉၀၃ ၅၁၃
!! အောက်တွင်ရွေးချယ်ပါ !! ၀ိမုတ္တိရသ သုခရိပ် ကိုမင်းဝေ ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာ ဓမ္မမေတ္တာ ဖားအောက်တောရဆရာတော် ဖြူးဆရာတော် အရှင်ဥတ္တမသာရ အရှင်လောကနာထ အရှင်လောကနာထ
!! အောက်တွင်ရွေးချယ်ပါ !! ကိုရန်အောင် ကိုညီနေမင်း ကိုသံလုံငယ် kokyawmyintoo အိုင်တီခရီးသည် ကိုရာမညဖိုးလပြည့် ကိုဇောင်း ကိုအရာတော်မြေ ကိုဝေလင်း ကိုကျော်စွာငြိမ်း အဲလာ ကိုစိုးတင်အောင် ကိုမိုးထက်မြင့် ကိုမနောသား ကိုစေတနာ kp3မိသားစု IT Men`s Blog ကိုစံပီး ကြယ်လမင်း စိုင်းနက္ခ ရဲ.နည်းပညာမှတ်တမ်း daweithar My IT World နည်းပညာမှတ်တမ်း မြန်မာဘလော့ဂါများ ပို့စ်အသစ်များ
!! အောက်တွင်ရွေးချယ်ပါ !! စာအုပ်စင်(၁) စာအုပ်စင်(၂) ကွန်ပျူတာနှင့်သတင်းနည်းပညာ ဗေဒင် ခေတ်ပေါ်သီချင်း ခေတ်ဟောင်းတေး(၂) ပန်းချီ မြန်မာဗွီဒီယို အားကစား ကာရာအိုကေ ကာတွန်း စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း မြန်မာစာ မြန်မာစကား ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် ဘလော့ဘ်လုပ်နည်း
!! အောက်တွင်ရွေးချယ်ပါ !! ဆုံဆည်းရာ ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ လွတ်လပ်သည့် အာရှအသံ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ ခေတ်ပြိုင် ဧရာဝတီ မဇ္ဈိမ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ ဗွီအိုအေ ရိုးမ ၃ မိုးမခ ယနေ့မြန်မာ နေ့သစ် အမ်အိတ်ခ်ျကေ (NHK) ခါကာဘိုရာဇီ(မိုးကြိုး သတင်းစာ) နေရဉ္ဖရာ မိုးသောက်ကြယ်(ဂျပန်) သံလွင်အိပ်မက် ငုရင်ပြင်
PAN THU TA
Pan Thu Ta record in Kuantan.
လင်းလဲ့ဦး
Window7အကောင်းဆုံး Themes
ထားဝယ်နေမျိုး © 2008 by ထားဝယ်နေမျိုး Web2Feel | ThemeLib.com | SunRays Template